Gudoomiye ku xigeenka amniga degmada Hiliwaa oo weerar ka badbaaday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Gudoomiye ku xigeenka dhanka siyaasadda iyo amaanka degmada Hiliwaa, Abshir Gaarane ayaa ka badbaaday weerar bambaano oo manta garigiisa lagu tuuray xilli uu marayey xaafadda SIISII ee magaalada Muqdisho.
Gudoomiye ku xigeenka iyo dadkii la socday ayaa la sheegay iney weerarka badbaadeen hase ahaatee waxyeelo soo gaartay gaarigii uu mas’uulkaasi watay.
Ciidamadii ilaalada u ahaa Abshir Gaarane ayaa furay rasaaas, waxaana muddo hakad galay isu socodka wadada, siday ay sheegayaan dadka deegaanka.
Waa mas’uulkii ugu horreeyey ee ka tirsan maamulka degmooyinka gobolka Banaadir ee la weerarro, iyadoo dhawaan maamulka gobolka Banaadir badelay dhamaan gudoomiyaashii iyo ku xigeenadii degmooyinka gobolka.
Wafdi ka socda baarlamanka Turkiga oo booqasho ku tegay Muqdisho